सडक प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने दस्तुर वृद्धि , कहाँको कति ? - बडिमालिका खबर
सडक प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने दस्तुर वृद्धि , कहाँको कति ?
२१ चैत, काठमाडाैं । सरकारले सडक प्रयोग गरेवापत सवारीसाधन धनिले तिर्नुपर्ने दस्तुर बढाएको छ । चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले साना र ठूला गाडीले सडक प्रयोग गरेपवापत तिर्नुपर्ने दस्तुर वृद्धि गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, नारायणघाट बुटवल खण्डका लागि बस, मिनिबस, ट्रक र हेवी मेसिन इक्वीपमेन्टका लागि १३०, कार, जिप, पिकअप भ्यान र ट्रयाक्टरका लागि ६० रुपैयाँ र तीन पांग्रे टेम्पु र मोटरसाइकलको लागि १० रुपैयाँ कायम गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।